SBO: Mariin Siyaasaa Impaayera Sana Keessatti Geggeeffamu Furmaata Hin Argamsiisu.
Caamsaa 24, 2018 (ONN) – Impaayera Itophiyaa keessatti nagaa waaraa argamsiisuuf, furmaata siyaasaa fiduu fi addatti ammoo gaaffii bilisummaa fi abbaa biyyummaa saba Oromoo barootaaf turee fi jiru, kan deebiin sirnaa waakkatamee jiruuf deebiin haqaa fi qulqulluun argamuuf ABOn alatti mariin nagaa buusuu biyya sana keessatti geggeessamu kamuu kan shiraan guutamee fi furmaata barbaadamu argamsiisu akka hin taane ummatni keenyaa fi hawaasni addunyaa hubatuu barbaachisa.
“Hundeen Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn Durfamu Bilisummaa Ummata Oromoo, Walabummaa Oromiyaa Dhugoomsuu dha.” (Ibsa ABO – Yaadannoof)
Qabsoo baroota hedduuf geggeessamaa tureen firiin herreguun hin danda’amne argameera. Wareegama qabsaawotni ABO, sabboontotni Oromoo eegala irraa qabanii baasaa as gahaniin bu’aan har’a tokko tokkoon Oromoo ykn akka sabaatti ummatni Oromoo argaa jiru kun mul’ate.
Hundaan olitti dureen qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn qabsoo Oromoo fi ummata Oromoo roga qabsiisuuf waldhaansoo hadhooftuu baroota dheeraaf godheen har’a addunyaa irratti ummatichi akka saba tokkichaatti beekamuu qofa osoo hin taane, biyyi Oromoo Oromiyaan kaartaa irratti akka mul’attu taasiseera. Kun taphatti, qoosaatti, haasaa afaaniin kan argame osoo hin taane, ifaajjii bara dheeraa, wareegami ol aanaan itti baasamee ti.
Addi Bilisummaa Oromoo kana hunda keessa bahee qabsoo Oromoo fi Oromoo sadarkaa har’aa kanaan gaheera. Sababa kanaaf, Addi Bilisummaa Oromoo salphaadhumatti dhaaba maqaan isaa tuqamu, xiqqeeffamuu fi akka baduuf itti duulamu miti. Bara mootummaa wayyaanee/TPLF/EPRDF kana dabalatee dhaabicha qacalummaa isaa irraa dhabamsiisuuf duulli karaa hundaan irratti adeemsisame ni jabeesse malee hin bal’eessine; caalaatti akka beekamtii argatuu fi deggersaa fi mararfannoon isaa akka dabalu taasise malee fedhiin diinotaa hin guutneef.
Addi Bilisummaa Oromoo utubaa jabaa eenyuyyuu hin sossoosneen dhaabbate. Dhaaba gaaddiddeeffamus miti. Akeekaa fi kaayyoo ganamaa irraa kan hin daddaaqamne, eenyullee akeeka isaa irraa isa hin jal’isnee fi hin deebisne, dhaaba galfata gootota wareegamtootaa iddoon gahuuf har’allee falmaa hidhannoo dabalatee qabsoo roga maraa finiinsaa jiruu dha. Duree qabsoo Oromoo, dhaaba seenaa haqaa dhiigaa fi lafee gootota, sabboontota ilmaan Oromoo kumaa kitilaan barraa’e qabu dha. Dhaaba akkasii bubbeen/qilleensi fedhe hin raasu.
Addi Bilisummaa Oromoo dhalachuun eenyummaa Oromoo dhabama irraa hambise. Kanaaf alagaatu ragaa dha. Saba tokkicha diinni gargar diigee, faffacaasee kutaa lafaa irra qubateen akka of yaamuu fi of beeku gochuuf irratti shire, ABOn dallaa shiraa kana diigee Oromoon saba tokkicha ta’uu beekee, sabummaa isaan ijaaramee bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaaf ijaaramee akka falmatuuf adda dureen qoodni qabsoo kenne olaanaa ta’uu seenaatu ragaa dha.
Wareegamni walitti fufiinsaan hoogganootni, miseensotni, qabsaawotnii fi deggertootni ABO akkasumas WBOn fi sabboontotni sadarkaa har’a Oromoon irra jiru kana dhaqqabsiisuuf baasan haalaan guddaa dha. Warri ABO hundeessuun daandii qabsoo saaqanii, kaayyoo iftuu fi xaliiloftuu dhaabichi ittiin masakamu qiyyaasanii falmaan bilisummaa fi walabummaa akka itti fufu gochuun ofiif kaayyoo fi akeeka eebbisamaa kanaaf, dhaaba kabajamaa fi jaallatamaa kanaaf aarsaa isa olaanaa wareegama lubbuu kafaluun hundaafis fakkii ta’anii darban sun beekumsaan, gootummaan, murannoon, of kenniinsaan, bilchina siyaasaan, biyyaa fi saba ofii jaallachuun, bilisummaa ummataa fi walabummaa biyya Oromiyaaf ejjennaa hin daddaaqamne warra qaban motoora qabsichaa fi sabichaa turan. Addi Bilisummaa Oromoo isaan kana irratti waan dhaabbateef hundeen isaa jabaa dha.
Isaan kaayyoo fi akeeka ABO irrratti cichanii wareegamuutu eenyummaa Oromummaa fi qabsoo isaa jiraachisee sadarkaa har’aan gahe. Isaan aarsaa ulfaataa baasuutu dhaloota har’aa humna jijjiiramaa Qeerroo Bilisummaa dhalchee ka’imman miliyoonotaan daandii isaan dhiigaan saaqan, kaayyoo isaan itti kitimaman irra hiriirsee qabsoo bilisummaa akka itti fufanii finiinsan taasise.
Kanaafi ABOn har’a kan kaleessaa caalaatti jabaatee, dagaagee, babal’atee tokko tokkoo mana Oromoo fi dhala Oromoo biratti kan mul’atu. Kanaafi asxaan qabsoo Oromoo, Alaabaan ABO ummata Oromoo biratti faajjii qabsoo bilisummaa ta’ee, egeree Oromiyaa achi keessaan akka ilaalan kan taasise.
Qabsoon guddatee finiinee boqonnaa haarayaatti haa ce’u malee, har’as hundeen sirna gabrummaa Oromiyaa keessaa hin buqqaane. Akeekii fi kaayyoon qabsoo Oromoo ABOn durfamu galii isaa isa maayii bira hin geenye. Gumaa goototaa, ilmaan Oromoo haga FXGtti aarsaa lubbuu baasanii fi baasaa jiranii kan deebisu bilisummaa ummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa ti. Haga kun iddoo hin geenyetti xumurri injifannoo qabsichaa sichi.
Addi Bilisummaa Oromoo kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda durummaan qabatee geggeessu milkeessuuf qabsoo hidhannoo, siyaasaa fi diplomaasii walciniinsisuun adeemsisu caalaatti cimsee itti fufuun sirna kolonii TPLF/EPRDFtti xumura gochuuf hojjechuu irraa hin boqotu.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo ijaareen, WBO daran jabeessuu fi babal’isuun sochii qabsoo karaa adda addaan deemsiseen warraaqsi biyyaalessaa FXGn akka dhohuu fi finiinu taasisuun Oromoo rarraga bilisummaatti siqseera. Warraaqsaa fi sochii qabsoo kana keessatti murnootni hawaasa Oromoo hundi hirmaatuun sirna wayyaanee fi ergamtoota isaatti xumurri akka godhamuuf hojiin hojjete tarrisanii fixuun waan danda’amu miti. Kana milkeessuuf hojiin ABOn-Qeerroon Bilisummaa Oromoo-WBOn hojjetan seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Wareegamni baasames akkanuma.
Qabsoo walitti fufiinsaan deemamaa as gaheen, wareegamoota garagaraa itti baafamaa har’a gaheen injifannoolee ummatni Oromoo dhaaba kallacha qabsoo isaa ABOn durfamee, Qeerroo Bilisummaa Oromoon walta’ee, WBO wajjin dhaabbatee falmiin argate butachuun, sirna kolonii wayyaanee/TPLF/EPRDF/OPDO kufaatii jala gahe dhabama irraa hambisuuf shirootni diinaa fi lukkeelee diinaan xaxamaa jiran baay’ee dha.
OPDOn waggootii 27n darbaniif diina wajjin dhaabbachuun qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamutti gufuu ta’aa, ilmaan Oromoo wayyaaneen walqixa hidhaa, ajjeesaa fi biyyaa baqachiisaa baate, warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa FXG geggeessamaa turee fi jiru dura dhaabbatuun sirnicha kufaatii irraa oolchuuf qabsoo Oromoo irratti yakkoota gugurdooo raawwatuun beekamtu, har’a akka waan qabsoo Oromoo hoggantuu fi Oromoof falmituutti dhihaachuun wareegama ilmaan Oromoo bilisummaaf bahetti qoosaa jirti. Bu’aa qabsoo Oromoo dhiiga qabsaawotaa fi sabboontotaa bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaaf baheen argame butachuun muudama aangoo sirna cunqursaa wayyaanee/TPLF/EPRDF jiraachisu muudamte. Muudama OPDOn nam-tokkeen muudamteen Oromoon aangoo biyya bulchuu qabateera, gaaffiin isaa deebi’eera, kana booda duulli gara misoomaa jechuun kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamuutti gufuu ta’uu itti fufteetti. Kanneen ABO fi akeeka isaa hin jaallatne, ilaalcha OPDOn ABOf qabdu irraa warri adda hin taanes qixuma OPDO, ABO fi akeeka qabsoo isaa irratti shira xaxuu fi Oromoo qabsoo isaa irraa daguuf, afanfajjii garagaraa uumuuf wixxifannaa guddaatti jiru.
Impaayera sana keessatti nagaa waaraa argamsiisuuf, furmaata siyaasaa fiduu fi addatti ammoo gaaffii bilisummaa fi abbaa biyyummaa saba Oromoo barootaaf turee fi jiru, kan deebiin sirnaa waakkatamee jiruuf deebiin dhugaa fi haqaa argamuuf ABOn alatti mariin nagaa buusuu biyya sana keessatti geggeessamu kamuu kan shiraan guutamee fi furmaata barbaadamu argamsiisu akka hin taane ummatni keenyaa fi hawaasni addunyaallee hubatuu barbaachisa. Adda Bilisummaa Oromoo moggeessuun ykn isaan duubatti rakkoo biyya sanaa ykn ammoo rakkoo Oromoo furra maqaa jedhuun qaamotni/dhaabotni fi nam-tokkee murtaawoon mariin/haasaan deemsisamu kamuu rakkoo polotikaa, dinagdee fi hawaasummaa baroota danuuf biyyattii hammacaa jiraatee fi jiru furuu akka hin dandeenye ummata Oromoo dabalatee kanneen dhimmichi nu ilaala jedhan hundi gadi fageessanii hubatuu dha qaban.
Addi Bilisummaa Oromoo haga kaayyoo qabsoo Oromoo hoogganu galmaan gahutti falmaa karaa hundaan geggeessu cimsee itti fufa malee, isa qophxeessuuf shiroota dhoksaan keessaa fi alaan xaxamaa jiran, olola afanfajjii diinotni, ergamtootni diinaa fi farreen geggeessaniin hin gufatu. Qeerroon Bilisummaa, WBOn waan itti dadhabaa turanii fi jiran, kaayyoo wareegama hunda irratti baasaa har’a gahan hanga milkeessanitti lallaba keessaa fi alaa, afanfajjii garagaraa geggeessamuuf sochii isaanii irraa hin dhaabbatan.
Kana waan ta’eef, ummatni Oromoo kan keessaa fi alaa shira diinotni, ergamtootnii fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamu irratti xaxan hubannoon, dammaqinaa fi qarummaan hordofuu fi fashalsuun ABO/WBO/Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin dhaabbatuun falmaa caalaatti finiinsuu qabu. Akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamu, bilisummaa ummata Oromoo dhugoomsuu fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu oggas galii isa gaha waan ta’eef
Previous articleWhat a crime it is to drive away the poorest and helpless from the ancestral land
Next articleThe Culprits of the Sidama Looqqe Massacre And All Civilians’ In Ethiopia Must Be Brought To Justice!